Wzọ 5 iji gbue asọmpi gị na ọdịnaya | Martech Zone
Tọzdee, Disemba 28, 2010 Sunday, Jenụwarị 19, 2014 Douglas Karr
Otu onye jụrụ na Quora ma ọ bụrụ na blọọgụ ha nwere ike ịsọ mpi na ngalaba nke blogosphere. Ajuju di oke nma iza ebe ahu… Achoro m ikwuputara m ihe m zara.
N'ezie ha nwere ike ịsọ mpi! Nnukwu ọdịnaya ga na-arị elu mgbe niile, n'agbanyeghị agbanyeghị ohere. Usoro dị iche iche ị nwere ike itinye bụ:
Bụrụ ngwa ngwa - Ọ bụrụ na ị bụ saịtị ma ọ bụ blọgụ mbụ iji weghara isiokwu ugboro ugboro, a ga-achọpụta gị karịa.
Na-adị n'elu - Understandghọta ọchụchọ na mmetụta ya na ọdịnaya gị ga-enyere gị aka ịchọta okporo ụzọ njin ọchụchọ.
Nwee mmekọrịta - Jiri usoro mgbasa ozi mee ka blog gị dịkwuo elu ma tinye usoro mgbasa ozi n'ime blog gị ka ndị ọzọ nwee ike ịkọtara gị ya. Ekekọrịta bọtịnụ, bọtịnụ retweet na ọkwa na Twitter, Facebook na LinkedIn bụ ihe dị mkpa.
Dị ịrịba ama - Mgbe enwere ihe ị ga-ekwu maka blọọgụ gị, ndị mmadụ ga - ekwu okwu ma ọtụtụ mmadụ ga - abịa.
Na-agbanwe agbanwe - Ide ederede na ọgụgụ isi na-eto eto chọrọ oge na oge. Echela na otu nnukwu post ga-eme ya maka gị post post ọ bụla na-agbakwunye uru incrementally.
Nnukwu ọdịnaya ga-afụfụ n'elu… ma na-ejizi ngwa ọrụ niile iji bulie ọdịnaya gị ma mee ka ọ dị mfe ịchọta bụ isi.
Tags: Analyticsbọọdụ mkpọsansonaazụ azụmahịaere ahịanzukọ ọmụmụ
Nnukwu Enyemaka Bill
Dec 29, 2010 na 1:43 PM
Enweghi m ike ikwenye karịa na isi ihe 5. Dị Mfe, ma ọ dịghị mfe. Nke ahụ bụ naanị nkwụghachi m. Ime ihe 5 n’ime ha niile ga-achọ nnukwu ego. Ihe ka ọtụtụ n'ime ndepụta ndị ahụ gụnyere itinye oge dị mkpa (ọ bụghị ikwu na ezighi ezi), mana # 4 bụ ụdị ihe dị iche. “Remarkablebụ onye pụtara oke” anaghị abịa naanị n’ihi na ị na-etinyekwu oge, agbanyeghị na ị na-agbanwe agbanwe, mmadụ nwere ike iche, na-eme ka ọnụọgụgụ nke ihe dị egwu mepụta. A ga m eche na gị, Doug, nwere ike ikpe ikpe maka ebumnobi doro anya karịa nke "ịdị ịrịba ama."
M gha agha ụgha, enwere m ihe ịghaghachi azụ.
Mgbe ụfọdụ, Nnukwu ọdịnaya na-ebili n'elu. Maka ọtụtụ akụkụ, na-enweghị nkwalite ma ọ bụ usoro ịzụ ahịa ebumnuche, Nnukwu ọdịnaya nwere ike ibi na ndagwurugwu na njin ọchụchọ na-adịghị ahụ anya. N'iburu nke ahụ n'uche, m ga-atụ aro ọnọdụ dịtụ iche maka ọkwa gị. Nnukwu Mgbalị ga-enye mmadụ ohere ịsọ mpi n'ahịa ịntanetị jupụtara (echiche ma ọ bụ ngwaahịa). Nnukwu ọdịnaya ga-eme ka ọ dịkwuo mfe.
Dee 30, 2010 na 11: 33 AM
Enweghị m ike ikwenye karịa! Nnukwu ọdịnaya nwere ike bụrụ nnukwu uru maka mbọ ahịa gị. Ozugbo e dere, ị kwesịrị ị na-ahu nagide niile ọwa ka egweri ya site na-esi na ọ gbara gburugburu online ohere.
Jenụwarị 4, 2011 na 5:10 PM
Akwa post Doug! Ekwenyere m na Big Help Bill - na-enweghị ụdị atụmatụ ntinye aka, ọdịnaya na-anọdụ ebe ahụ na-eche ka a chọpụta ya. Zụta kacha mma ewerela nke a n'ọkwa ọhụrụ, lelee akụkọ a site na Ad Age: http://adage.com/article?article_id=147956
Daalụ maka Doug dị egwu, anyị kwesịrị ịchụkwudo n'oge adịghị anya!
Onye isi ala / onye isi ala